Political Page ပုလဲသွယ်: ကိုရီးယားနေ မြန်မာတွေ၊ အနုမြူဘေးက ဝေးပါစေ
ကိုရီယားလူမျိုးအားလုံး ရူးမိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်က လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
How potent are North Korea's threats? မြောက်ကိုရီးယားခြိမ်းခြေက်မှု ဘယ့်လောက် အစွမ်းရှိသလဲ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21710644
Why Do We Laugh at North Korea But Fear Iran? ကျွန်တော်တို့ မြောက်ကိုရီးယားကို ရယ်သွမ်းသွေးပြီး၊ ဘာလို့ အီရန်ကြ ကြောက်နေရသလဲ http://www.topix.com/world/north-korea/2013/04/why-do-we-laugh-at-north-korea-but-fear-iran
Posted by Dr. Tint Swe at 5:41 AM